टन्सिलले सतायो ? चाँडै निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य टन्सिलले सतायो ? चाँडै निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
२०७७, २४ बैशाख बुधबार ०८:४०
टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खाना आदिका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छौं ।
हाम्रो जिब्रोको ठीक पछाडि बदाम आकारको दुई छोटो छोटो अंग हुन्छ । जहाँ मुखबाट गलासम्म पुग्ने दुई यो अंग हुन्छ जसलाई टन्सिल भनिन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउने कार्य गर्छन् । यसले शरीरको कयौं बिरामी तथा तथा संक्रमणबाट बचाउँछ ।तर कयौं पटक यो शरीरलाई बचाउने को प्रक्रियामा स्वयं नै बिरामी हुन्छ । संक्रमण या कुन अन्य कारणबाट टन्सिलमा पीडा हुन्छ । कयौं पटक यो यति बढ्छ की खान पिउनसमेत समस्या हुन्छ ।
Previous articleस्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेकपाका दुवै समूह आ-आफ्नो रणनीतिमा व्यस्त
Next articleभारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन १२३ को मृत्यु, संक्रमित संख्या ४९ हजार नाघ्यो